Mabhuku akanakisa azvino
Mabhuku pane zvinyorwa zvazvino
Rufu rwakataurwa nesapiens kune Neanderthal
Hazvisi zvese zvichange zvichange zviri zvibofu zvehupenyu. Nokuti muchirevo chinotonga zvinhu zvose, chirevo ichocho chinoratidza kuvapo kwezvinhu chete zvichienderana nehukoshi hwazvo hwakapesana, hupenyu nerufu zvinoumba hurongwa hwakakosha pakati pekunyanyisa kwatinofamba. Uye chikonzero ...
Guta reVapenyu, naNicola Lagioia
Kudzika muvakidzani zvisingatarisirwi monstrosities. Vanachiremba veJekyll vangave vasati vaziva kuti ndiVaHyde. Uye kuti kana varipo, hakusi kuti kwave neshanduko. Zvichave nekuda kweiyo chirevo chekare chinogona kuita kuti ganda rako rimire "Ndiri munhu uye hapana chinhu chemunhu chinozivikanwa kwandiri", nekuti ...
Pasi pekutarisa kweshato yakamuka, naMavi Doñate
Kuve mutori wenhau kunosimbisa mapoinzi ese mukuzvitora sewe munhu akafamba. Nekuti kuti utaure zvinoitika chero kupi zvako munyika unofanirwa kuve neruzivo rwakakosha kuti utaure zviri kuitika nekuvimbika. Mhedzisiro yacho inogona kunge iri, semunyaya ino, ...
Haunting Valley, naAna Wiener
Isu tese taive takatarisira kuchikwata chevanyengeri nemamwe mageek kubva kuSilicon Valley. Boka revana vababa vakazivisa hutsva hwenyika hupfumi hurongwa hwekubatsira vese uye hwakarerekera kusocial society. Kwayedza kwenyika nyowani yehunyanzvi pamwe nezvakanakira kubatsirwa ...
Matanda, rakanyorwa naPhilipp Blom
Iko kushandiswa kweshoko rekuti "mutambo" kunoratidza pachena chiratidzo chenyika yedu sechinhu chisiri chaicho chaicho. Nekuti zvese mutambo, tiri vagari venguva pfupi munzvimbo ino uye nekudaro isu hatigone kutora zvakanyanya zvakanyanya chero chinhu. Chete, zvinosuwisa, iyo etymology ye ...
Maitiro Ekudzivirira Njodzi Yemamiriro ekunze, naBill Gates
Nhau idzi hadzina kubatika kwenguva yakareba, kunyangwe chikamu chemitambo (kunyanya kune fan chaiye weZaragoza). Uye, majee padivi, nyaya yekudyidzana kwenyika, shanduko yemamiriro ekunze yakarambwa nehama yaRajoy yesainzi, uye izvi zvinofadza mutating coronavirus ...
Extremadura chitubu, naJulio Llamazares
Kune vanyori avo izvo zvinoitika munyika zvine cadence yakasiyana, iyo yakatosiyana mativi kubva kune avo mafrifiti ekuwedzera maonero uye maonero anopedzisira asvika kwatiri. Julio Llamazares anobva kudare iri revatauri avo vanomhanya zvine mutsindo kuburikidza nehunyanzvi chaihwo pavanongotipwanya ...
Hupenyu hunotaurwa nesapiens kuNeanderthal, naJuan José Millas
Zvichava kuburikidza nhaurirano inotaurira hupenyu ... Nekuti chinhu chimwe ndechekuti mabhureki anoshevedzwa sevanopokana zvakanyanya kubva kuupenzi hwakajeka hwemaziso avo, uye chimwe chinhu ndechekuti tinosangana nevarume vaviri veproto-varume, vanonamira muruoko, kuda kutaura nezve kupera ...
Kubva kuLazarillo de Tormes isu hatina kuwana bhuku risingazivikanwe rine zvido zvakakura kupfuura izvi. Nekuti iyo nyaya inochinjika kune yepasirese mamiriro ane isu tese netayi piiiiii (angave mazai kana mazai). Kune denda rinopisa pamatanho ese, mana ...